Ampidiro ny Google Adwords sy ny Salesforce amin'ny Bizible Analytics | Martech Zone
bizible mamela anao handinika ny zava-bitan'ny Adwords anao mifototra amin'ny fiovam-po fa tsy tsindry, mamela anao hiasa manokana amin'ny Salesforce handrefesana ny fahombiazana mifototra amin'ny fampielezan-kevitra, vondrona ad, atiny doka, ary haavon'ny teny lakile. Koa satria bizible miasa miaraka amin'ny fanarahana fanentanana amin'izao fotoana izao ao amin'ny Google Analytics, azonao atao ny manara-maso mora foana ny fantsona marobe amin'ny fikarohana, sosialy, karama, mailaka ary fanentanana hafa.
Endri-javatra lehibe voatanisa ao amin'ny tranokala Bizible
ROI AdWords - mamela anao hitrandraka lalina amin'ny ROI AdWords amin'ny fampielezan-kevitra, vondrona dokam-barotra, atiny doka, ary haavon'ny teny lakile, mba hahafahanao mandrefy sy mandray fanapahan-kevitra momba ny fanatsarana ny fikarohana mifototra amin'ny vola miditra.
Fanaraha-maso Multi-Channel - mitatitra ny masontsivana UTMs an'ny Google Analytics mivantana ao amin'ny Salesforce, izay manamora ny fanombanana sy fanatsarana izay fampielezana marketing amin'ny Internet ataon'ny ROI.
Tantara mitarika antsipiriany - Ampiaraho amin'ny ekipa mpivarotra aminao ny fampahalalana momba ny varotra ilain'izy ireo hanakatonana fotoana bebe kokoa. Jereo ny fifandraisan'ny fitarihana amin'ny tranokalanao talohan'ny niovany fo, miampy ny fampahalalana momba ny marketing rehetra mifandraika amin'izany.
Custom Reports - Manjary sarotra sy mizarazara ny varotra an-tserasera. Manamboara tatitra momba ny tahiry azo ampiharina, miampy tatitra manokana tsy manam-petra izay mifanaraka amin'ny orinasao.
Fampifangaroana marobe - Avy amin'ny fanavaozana eo no ho eo Salesforce mankany amin'ny automatisation marketing, rafitra fitantanana atiny ary koa Optimizely ho an'ny fitsapana A / B. 60% ny bizible mampiasa Marketo koa ny mpanjifa, Hubspot, Act-On, na Eloqua. Bizible koa dia manana fametrahana tsindry tokana miaraka amin'ny WordPress, Joomla, na Drupal.
Afaka mahita Bizible ao amin'ny Saleforce AppExchange.
Tags: ab testingAct-Onappexchangebizibleafa-po ny rafitra fitantananadrupaleloquagoogle adwordshubspotJoomlaautomation marketingmarketooptimizelysalesforcempivarotra appexchangesalesforce ppcWordPress
Alefaso ny fivarotana ara-tsosialy amin'ny tranokala Ecommerce misy anao amin'ny GetSocial